Indlu yasepulazini yomculi omuhle esigodini sase-canalside
I-“Atelier Alex” yindlu yasepulazini endala, phambilini yayiyikhaya kanye neshabhu yokusebenzela yombazi osethi, umdwebi kanye nomqophi wezithombe. U-Cécile no-Natalie bawubuyisele ngothando ukuze bakhe ikhaya lomndeni elimangalisayo enhliziyweni yesigodi esiseceleni komsele womsele.
Indawo yokusebenzela yase-Alex iyindlu yasepulazini endala, ngaphambili eyayiyindawo yokusebenzela yendlu yombazi, umqophi wezithombe.
U-Cécile no-Natalie bawubuyisele ngothando, bakha ikhaya lomndeni elimangalisayo enhliziyweni yedolobhana elihle emaphethelweni eBurgundy Canal.
Igezwe ngokukhanya kwemvelo, indlu engu-270 m2 ilala kufika ku-13 emakamelweni okulala ayisithupha ayingqayizivele. Izindawo zomphakathi zinegumbi lokuhlala elikhulu nelintofontofo elinaphansi kwamatshe e-Burgundian kanye nesitofu esibaswa ngokhuni, kanye nekhishi/indawo yokudlela evulekile engu-60m2, nenembawula yezinkuni, evulela engadini.
Indlu ibekwe phakathi nedolobhana elincane lendabuko kuMsele waseBurgundy; ingadi ibheka ezindaweni ezivulekile, amagquma anamahlathi ase-Auxois, futhi ngezinye izikhathi iqembu lezinkomo ezinobungane!
Njengoba igezwe ngokukhanya kwemvelo, indawo yayo engamamitha-skwele angama-270 ingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-13 emakamelweni ayo ayi-6 ahlukile.
Ezindaweni ezivame yakhiwa ukhululekile futhi efudumele ikamelo elikhulu ephilayo, wenza bendabuko slabs Burgundy phansi futhi ukufuthelana ngu isitofu, nekhishi ezinkulu futhi ezinhle / Igumbi udla, ehlotshiswe eziko, futhi namafasitela amakhulu ezibheke engadini .
Le ndlu iphakathi nendawo yendabuko yaseBurgundian eduze kweBurgundy Canal; ingadi yayo ibheke izihlahla, ihlathi elingumakhelwane namagquma aluhlaza ase-Auxois lapho kuklaba khona izinkomo ezinobungane zikaCharolais.
I-“Atelier Alex” iyindawo ekahle yokuhlangana nabangane noma umndeni kanye nesisekelo esikahle sokuthola ubuhle obuzungezile ngezinyawo noma ngebhayisikili. Ibanga elingu-5km kuphela ukusuka ezivinini zemvelo zase-Auxois, kuphinde kube nje uhambo olufushane ukusuka kunqwaba yamachibi amangalisayo nemizana yasendulo. I-Dijon ne-Beaune ziyimizuzu esheshayo engu-40 ngemoto, njengeziza zomlando ze-Fontenay Abbey kanye ne-Buffon Forges. Idolobha elisegqumeni laseFlavigny, okuyikhaya le-Anis edume umhlaba wonke, liqhele ngemizuzu engama-20, njengedolobha lezimakethe laseSaulieu, isango eliya epaki likazwelonke laseMorvan elimangalisayo.
Indawo yokusebenzela yase-Alex iyindawo ekahle yokuza nabangane noma umndeni kanye nesiqalo esihle sokuthola le ndawo yasemaphandleni enhle ezungezile ngezinyawo noma ngebhayisikili.
Amakhilomitha angu-5 kuphela ukusuka ezivinini eziphilayo, imizuzu embalwa ukushayela ukusuka emachibini amaningi amahle kakhulu kanye nemizana yasendulo.
I-Dijon ne-Beaune iqhele ngamakhilomitha angu-40 ngemoto, kanye nezindawo zomlando ze-Fontenay Abbey kanye ne-Forges de Buffon.
Idolobhana elisegqumeni laseFlavigny, elidume nge-anise yalo edumile, liqhele ngemizuzu engama-20, njengoba kunjalo nemakethe yendawo yaseSaulieu emasangweni eMorvan National Park.
Sihlala endaweni futhi siyayithanda le ndawo. Siyajabula ukuncoma izindawo zokudlela nezokuvakashela kanye nokwabelana nawe ngezithombe ezinhle kakhulu.
"Igumbi lengadi", igumbi lokulala eliphindwe kabili eline-en suite eliphansi, lihlinzeka ngendawo yokuhlala kunoma ngubani othola izitebhisi zinzima. Kunamakamelo amabili okulala amabili negumbi elinamawele esitezi sokuqala nelinye eliphindwe kabili newele phezulu kwendlu, okungenwa kuzo ngezitebhisi ezincane zokhuni ezithandelayo.
Indlu ihlotshiswe ngemidwebo ka-Cécile, u-Natalie, abanikazi bangaphambilini nabanye. Sithemba ukuthi uzokujabulela. Wonke umsebenzi kaCecile uyatholakala ukuze uthengwe. Ngicela usibuze.
Ulwazi olwengeziwe :
Sihlala eduze futhi siyayithanda le ndawo. Sizokujabulela ukuncoma izindawo esingazivakashela, zokuphumula, zokudla, njll., ngokwabelana nawe ngamakheli esiwathandayo.
Igumbi lokulala elingaphansi libheke ingadi kanye negumbi lokugezela elihlangene; lokhu kuvumela ukufinyelela okulula kubantu abangaba nobunzima ngezitebhisi.
Indlu ihlotshiswe ngomsebenzi wobuciko kaCécile noNatalie, kanye nalabo ababehlala ngaphambili.
Sithemba ukuthi uzokujabulela. Yonke imisebenzi ka-Cécile Geiger iyatholakala ukuze ithengiswe. Ungangabazi ukusicela imininingwane eyengeziwe uma kunesidingo.
Sihlala endaweni futhi siyayithanda le ndawo. Siyajabula ukuncoma izindawo zokudlela nezokuvakashela kanye nokwabelana nawe ngezithombe ezinhle kakhulu…